आइसोलसनमै छट्पटिएर छोरा बिते, लापरबाहीप्रति आमाको बिलौना – AayoMail
आइसोलसनमै छट्पटिएर छोरा बिते, लापरबाहीप्रति आमाको बिलौना
आयाेमेल संवाददाता २०७७ असार १० गते ११:५१
धनुषाको हंसपुर नगरपालिका–७ नौवाखोर पर्साही बस्ने नीलमदेवी सदा जनकपुरको जनक चोकमा अचेत अवस्थामा भूइँमै सुतेकी थिइन्।
पिपलको रूखमुनि उनका केही आफन्त र अधिकारकर्मीहरू पनि साथै थिए। होस आएको बेला नीलम रुँदै छोरा ल्याइदिन सबैसँग गुहार गरिरहेकी थिइन्।
प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरका ‘चिकित्सकहरूको हेलचेक्र्याइँले मेरो छोराका ज्यान गयो,’ होस आएलगत्तै नीलमको मुखबाट निस्कने शब्द थियो।
मुसहर समुदायकी उमाको एकमात्र १६ वर्षीय छोरा राजु सदाको सोमबार बिहान करिब ३ बजे प्रादेशिक अस्पतालको आइसोलेसनमा मृत्यु भएको हो।
चिकित्सकहरूको निगरानीमा आइसोलेसन भर्ना भएका छोराको ज्यान गएकामा उमालाई पत्यार लागेको छैन। एकमात्र छोराको अस्पतालकै आइसोलेसनमा मृत्यु भएपछि राजुकी दुई बहिनीको पालनपोषणदेखि बिहेबारीको चिन्ताले सताएको छ नीलमलाई।
भारतको मद्रासस्थित एक रेस्टुरेन्टमा पिज्जा बनाउन काममा संलग्न राजु जेठ १४ मा घर फर्किएका थिए। घर फर्किएलगत्तै राजुलाई गाउँकै क्वारेन्टाइनमा भर्ना गरियो।
क्वारेन्टाइनमा भर्ना भएको १० दिनपछि आडिटी परीक्षण भएको थियो। आरडिटी रिपोर्ट पोजेटिभ आएपछि राजु प्रादेशिक अस्पतालको आइसोलेसन वार्डमा भर्ना भएका थिए।
क्वारेन्टाइनबाट राजु र उनीसँगै मद्रासबाट फर्किएका उनका साथी अरुण सदालाई टिपरमा राखेर प्रादेशिक अस्पतालको आइसोलेसन पठाइएको आफन्तहरूले बताएका छन्।
असार ८ गते राजुको आइसोलेसनमै छट्पटिएरै ज्यान गएको थियो। क्वारेन्टाइनदेखि आइसोलेसनसम्म सँगै रहेका अरुणले राजुलाई झाडापखालाको समस्या देखिएको बताएका छन्।
राजुको स्वास्थ्य बिग्रिएकोबारे डाक्टरहरूलाई फोन गरेर जानकारी गराउँदासमेत समयमा नआइदिएको अरुणको भनाइ छ। ‘स्वास्थ्य बिग्रिएपछि छट्पटिएर राजु बेडबाट भूइँमा लड्यो,’ अरुण भन्छन्, ‘चार पाँचपटक फोन गरेपछि बल्ल एकजना डाक्टर’साब आइपुग्नुभयो। छट्पटिएर मेरो सामुन्ने राजुको ज्यान गयो।’
‘समयमै डाक्टर आइदिएको भए सायद ऊ बाँच्थ्यो होला,’ अरुण भन्छन्।
प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा कोरोनाका फोकल पर्सन डा. कुलदीप पण्डित चिकित्सकको लापरबाहीले राजुको ज्यान नगएको दाबी गर्छन्।
राजुको स्वास्थ्य बिग्रिएको जानकारी पाएलगत्तै दुईजना चिकित्सक तत्काल पुगेर उपचार गरेको डा. पण्डितको भनाइ छ।
आफूहरूले कोरोना संक्रमणको आशंका गरे पनि राजुको पिसिआर रिपोर्ट नेगेटिभ आएको डा. पण्डितले जानकारी गराए। ‘आरडिटी रिपोर्ट पोजेटिभ आउनुका साथै लक्षण हेर्दा हामीले कोरोना संक्रमणको आशंका गरेका थियौं, तर आइतबार पिसिआर रिपोर्ट नेगेटिभ आयो,’ उनले भने।
आइसोलेसनमा भर्ना हुँदा झाडापखाला र बान्ताको समस्या देखिएका राजुलाई औषधी चलाइसकेपछि सुधार भएको पण्डितले बताए। ‘आइसोलेसनमा भर्ना हुँदा राजुलाई झाडापखाला र बान्ताको समस्या थियो, डाक्टरसाहेबहरूले औषधी दिनुभयो, सुधार पनि भइरहेको थियो,’ उनी भन्छन्, ‘आइतबार राति अचानक उनको स्वास्थ्य बिग्रियो, कोरोना नरहेको पुष्टि भइसकेकाले तत्काल आकस्मिक कक्षमा भर्ना गर्न लगायौं। उपचारकै क्रममा उनको मृत्यु भयो।’
मिनिङ्गो इन्सेफ्लाइटिसका कारण राजुको मृत्यु भएको आफूहरूको अनुमान रहेको डा. पण्डितको भनाइ छ।